Buuggaaga Ciyaaraha ee Caadiga ah Si Aad Ugu Gudbiso Guul 2020 Fasax Ah | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 15, 2020 Khamiista, Oktoobar 15, 2020 Michael Della Penna
Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu saameyn ba'an ku yeeshay nolosha sidaan ognahay. Qawaaniinta howlaheena maalinlaha ah iyo xulashooyinka, oo ay kujiraan waxa aan soo iibsano iyo sida aan ugu dhaqaaqeyno sidaas, ayaa isbedelay iyada oo aysan jirin wax calaamado ah oo ah in aan dib ugu laabano qaababkii hore waqti dhow. Ogaanshaha ciidaha waxay ku dhowdahay geeska, in la fahmo oo la odoroso dabeecadaha macaamilka inta lagu jiro waqtigan aan caadiga ahayn ee mashquulka badan ee sanadka ayaa fure u noqon doonta in lagu daweeyo waaya aragnimada ganacsi ee aan caadiga ahayn ee ku jira jawi kale oo aan la saadaalin karin.
Kahor sameynta istiraatiijiyadda saxda ah, waxaa muhiim ah in marka hore laga fekero qaar ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee laga qaado dabeecadaha macaamiisha laga soo bilaabo qeybtii hore ee 2020, iyo waxa ay saameyn ku yeelan karaan suuqleyda iyo noocyaduba. Tusaale ahaan, kuleylka cudurka faafa ee COVID-19, tafaariiqleyda ayaa u kuurgalaya kor u kaca dukaamaysiga qadka tooska ah iyo omni-ka ah maadaama ay dadku doortaan dhaqammo iibsi oo ammaan ah oo ku habboon. Xaqiiqdii, marka la barbardhigo dukaamaysigii fasaxa ee sanadkii hore, macaamiisha ayaa lagu soo waramayaa inay 49% aad u xiiseynayaan wax ka iibsiga khadka tooska ah iyo 31% aad u xiiseynaya ka adeegashada barnaamijka. Dhinacyada qaar suuqyadu waa inay miyir qabaan in laga yaabo xilligan, in ka badan kuwa kale ee ka horreeya, inuu noqon doono fasax dijitaal-koowaad ah.
Dheeraad ah, rasiidka InMarket iyo xogta kaararka amaahdu waxay muujinayaan in macaamiisha ay u janjeeraan xagga qiimaha ku xiran calaamadaha ay sida ugu fiican u yaqaanaan xilliyadan aan la hubin. Xaqiiqdii, astaamaha sumadaha gaarka loo leeyahay ayaa la muujiyey inay ku koraan caan ka ah dhammaan kooxaha dakhliga, oo ay ku jiraan kuwa sameeya wax ka badan 100K sannad kasta, iyo kharashka ku baxa noocyada caanka ah ee badan ayaa sii kordhaya maaddaama macaamiisha ay ku soo laabanayaan magacyada caanka ah ee qiimeynta qiimaha ay doorteen.
Fiiri InSights InMarket
Maskaxda ku hay isbedeladaan iyada oo lala kaashanayo istiraatiijiyad olole wax ku ool ah waxay fure u noqon doontaa daweynta khibradaha wax ku oolka ah ee wax iibsiga ee wax ka badalaya dhawaqa xilliyada fasaxa, iyo fowdada COVID-19. Sidan oo kale, magacyada guuleysta waxay hubin doonaan inay tixgeliyaan qodobbada soo socda ee muhiimka ah ee istiraatiijiyadooda:
Fahmaan Dhageystayaashaada Bartilmaameedka ah
Sida olole kasta, fahamka bartilmaameedka dhageystayaasha iyo dhaqankooda booqashada kahor waxay noqon doontaa talaabada ugu horeysa ee muhiimka ah ee si wax ku ool ah loogu gaaro macaamiisha xilliyada muhiimka ah. Tani waxay si gaar ah muhiim u noqon doontaa xilliyada hadda la joogo, halkaas oo dabeecadaha wax iibsiga iyo baahiyaha ay sii socdaan inay is beddelaan. Markaad fiiriso qaababka booqashada iyadoo loo marayo xogta goobta taariikhiga ah had iyo jeer waxay udub dhexaad u ahayd geeddi-socodka xog ururinta, laakiin waxay caddeyn doontaa xitaa ka sii muhimsan xilligan fasaxa si loo saadaaliyo isbeddelladan aan horay loo arag ee qaababka wax iibsiga. Qaybaha muhiimka ah ee lagu garto xilligan waxay noqon karaan macaamiisha daneynaya qaadista dhinaca, kuwa u nugul beddelaadda dabeecadda iibsiga kanaalka iyadoo la tixgelinayo aafada, iyo kuwa la qabsiga deegaanka dibedda iyagoo isku duway hiwaayadooda iyo danahooda.
Fahamka macnaha guud ahaan, iyo awood u lahaanshaha si sax ah u saadaalin karo baahiyaha iyo dabeecadaha dhagaystayaasha ayaa ugu dambayntii waxa dhammaan noocyadu ku dadaalayaan inay gaaraan, iyo falanqaynta xogta ayaa sii wadi doonta inay door muhiim ah ka ciyaaraan hawshan. Sidaa darteed, inta lagu gudajiro marxaladan uruurinta macluumaadka 360-aragti macaamiisha ah ayaa la tixgeliyaa marka la falanqeynayo dabeecadda wax iibsiga kahor booqashada. Kaliya markaa ayeey magacyadu awood u yeelan doonaan inay si wax ku ool ah u adeegsadaan aragtiyo si ay ugu wargeliyaan soo gudbinta ololahooda.
Ka Faa'iidee Kanaallo Badan Waqti Dheer
Kordhinta doorbidida internetka iyo omni-ka adeegsiga, ka faa'iideysiga wadiiqooyin badan oo ololahaaga suuq geynta ah ayaa fure u noqon doonta kaqeybgal fara badan oo macaamiil ah meelo badan oo taabasho ah waqtiga dhabta ah.
Hadday ahaan lahayd khadka tooska ah, taleefanka gacanta, ama barnaamijka, ama TV-ga ku xiran, iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka ka-qaybgalka waqtiga-dhabta ah ee guud ahaan barnaamijyadan waxay muhiim u yihiin bixinta iyo falanqaynta waayo-aragnimada macaamiisha 360 inta ay ku guda jiraan go'aan qaadashada iyo safarada ay ku iibsanayaan. Maaddaama fursadaha ka-qaybgalka dijitaalka ah ay kaliya u kordhayaan saacado dheeraad ah oo casri ah, astaamaha guuleysta waxay noqon doonaan kuwa barta sida looga faa'iideysto barnaamijyadan kala duwan si ay macaamiisha ugu gaaraan guriga, socodka iyo dukaamada xilligooda ay u baahan yihiin.
Tusmada Curate markaad siineyso Iibsasho Fudud, Degdeg ah, Habboon
Jawiga maanta, ku kala jebinta buuqa indhaha qabashada, khuseeya, iyo waxyaabaha soo jiidashada leh ayaa hadda ah miis miis saaran. Macaamiisha sii kordheysa ee feejignaanta badan leh ee ka labalabeynaysa inay lacag ku qarashgareeyaan wax iibsashada lama filaanka ah, haddana hadda waa ka sii muhiimsan tahay in magacyadu ay gudbiyaan farriimo bartilmaameed sarre leh si loo dhiso kalsooni, isbarasho, iyo dareen caawimaad leh oo ka imanaya noocyada si dabiici ah u caawiya dukaameeyaha safarkooda iibsashada . Marka sidaas la samaynayo, beddelaadda iibsiga ayaa noqon doonta mid aad u fudud, waxaana ka sii muhiimsan, aasaaska xiriirka macaamiisha muddada dheer ayaa la dhigi doonaa.
Intaa waxaa sii dheer, magacyadu waxay u baahan doonaan inay ku darsadaan farriintooda iyagoo isku duubaya tiknoolajiyada iyo fududeynta adeegyada iibsiga si dhakhso ah, fudud oo sahlan sida hal guji oo dalbasho ah, dhagsii shaqeynta gaadhiga, khadka tooska ah si looga gudbo xulashooyinka qaadista iyo digniinta wax soo saarka / alaabada. Iyada oo la cabbirayo saameynta dadaalladii xayeysiinta ee hore iyo natiijooyinkooda offline-ka iyo dabeecadaha wax iibsashada, magacyadu waxay awood u yeelan doonaan inay si fiican u fahmaan cidda ay yihiin macaamiishoodu iyo noocyada ay ka kooban yihiin, farriimaha iyo adeegyadu waxay wadaan dhaqammada wax iibsiga ee la doonayo iyo iibsashada. Samaynta falanqeyntan socota waxay u oggolaan doontaa oo keliya olole guul oo guul leh, laakiin ololeyaasha mustaqbalka ee soo socda.
Maskaxda ku hay qodobadan muhiimka ah, iyadoo la fahmayo isbeddelada dhowaanahan ku dhacay dabeecadaha wax iibsiga ee ka dhashay COVID-19, labaduba waxay muhiim u noqon doonaan calaamadaha si ay ugu guuleystaan ​​xilligan fasaxa duruufaha noocan oo kale ah ee aan horay loo arag. Laakiin jebinta qaylada cad ee khalkhalka warbaahinta iyo qiimaha wadista waxay noqon doontaa caqabad muddo dheer ah oo ka baxsan fasaxyada iyada oo suuqyadu ay markhaati ka yihiin dhaqdhaqaaqa marinno badan iyo xeerarka isweydaarsiga ganacsiga ee ku-tiirsanaanta khadka tooska ah. In kasta oo bilaha soo socda ay sii ahaan doonaan waqti aan la saadaalin karin ee ganacsiyada, qaadashada muhiimka ah waxay ahayd ku tiirsanaantayada sii kordheysa ee ku saleysan fikradaha xogta ku saleysan iyo adeegsiga xalka xalalka farshaxanka si aan si fiican u fahamno dhaqanka macaamiisha uguna xirnaano heer qoto dheer , Dhisida khibrado wanaagsan oo loogu talagalay noocyada iyo macaamiisha si isku mid ah.
Soo Degso Buugga Ciyaaraha Fasaxa ee 2020 ee InMarket
Waxaan kuu rajeyneynaa nasiib wacan xilligan ciida, iyo dukaamaysi farxad leh!
Tags: 2020Degree 360tikniyoolajiyaddaadtechkhibradda macaamiishaCOVID-19dukaameysiga ciidahasuuqamulti-channelmasiibowaqtiga dhabta ahtafaariiqdabartilmaameedka dadweynaha